यी ७ चिज मागेर कहिले प्रयोग नगर्नुहोस् नत्र ‘अनिष्ट’ हुन्छ!! - Babal Khabar
गत केहिसमय हाम्राे रितिरिवाजका अनुसार हामि सँग भएका केहि सामान वा छरछिमेकमा भएका केहि सामान पैचाे माग्ने वा दिने गर्थ्याे, तर याे रितिरिवाज भने अहिले हट्दै गएकाे छ ।
अरुसंग मागेर कुनै सामाग्री चलाउने बानि छ भने त्यो बानी त्याग्नु नै राम्रो हुन्छ । यो बानि आफै माथि समस्या निम्त्याउने कारक बन्ने धार्मीक मान्यता छ ।
धार्मीक मान्यता अनुसार कतिपय अवस्थामा अरुसंग सामान मागेर काम चलाउने बानिले नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न भई हानि पुर्याउने गर्दछ ।तसर्थ ति सामाग्री प्रयोग मागेर गर्नबाट बच्नुपर्दछ,
७. औठी– अरुसंग मागेर लाउन नहुने अर्को सामाग्री हो, औठी । रत्नवाला औठी मात्र होइन कुनै पनि धातुको औठी समेत अरुको लगाउनु हुदैन । औठी लगाउने औलामा मानिसको जीवन र स्वास्थ्य जोडिएको हुन्छ । यो पनि पढनुस प्रायः युवतीहरू मीठो बोल्ने केटाको कुरा छिट्टै पत्याइहाल्छन् र धोका खान पुग्छन् ।
तर अलिकति दिमाग लगाउने हो भने धोकेबाज केटाको बारेमा थाहा पाइहालिन्छ । तल लेखिएका कुरा पढेर तपाईं धोकामा पर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
फ्लर्ट गर्न माहिर र धोकबाज चरित्र भएका युवकहरू मीठो बोल्न माहिर हुन्छन् । मीठो कुरामा फस्ल्याङफुस्लुङ पारेर युवतीलाई पट्ट्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ ।
धेरै पुरुषको मान्यता के हुन्छ भने महिलासँग नजिक हुने भनेकै शा’रीरिक स’म्बन्ध बनाउनका लागि हो । अनि यस्ता पुरुषले महिलासँग से’क्स सम्बन्धी कुरा गर्न खोज्छन् । गलत नियत भएका पुरुषको ‘रहस्यमयी व्यक्तित्व हुन्छ ।
तर यसको ठिक विपरीत, मीठो र भद्र वचन बोल्ने महिला जीवनसाथी बनेमा एउटा पु’रुषको जीवन अमृतमय बन्छ ।
३. मनि माइन्डेड अर्थात् पैसालाई मात्र महत्त्व दिने-आफ्नो श्रीमानले सधैँ पैसा मात्रै कमाओस् भन्ने सोच भएका महिलाहरूले हरेक पु’रुषलाई पैसा कमाउने मेशिनबाहेक अरू केही ठान्दैनन् ।
५. हस्तक्षे’पकारी स्वभाव-कुनै-कुनै महिलाले पु’रुषले गरेका हरेक काममा ह’स्तक्षेप गर्न मन पराउँछन् । यसरी हस्तक्षेप गर्दा आफूले जितेको महसुस गर्दछन् । साभार गरियको खबर ।
Prevघरमा बेला-बेलामा माउसुली देखिए ? हुनसक्छ यस्तो कुराको संकेत
nextदैनिक ३ किलो माटो र ढुंगा खाने अनौठो ब्यक्ति हेर्नुहोस् ।